Nwere a Blackberry na-eche echiche ka ịgbanwee gaa na Apple? Blackberry nwere otutu ya ịdị ebube na Apple si amara ka guzo na ya. Ị na-adịghị na mkpa ihe iPhone ita okwu; na ị nwere iOS ụlọ ahịa ahụ bụ otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa.
iOS na ngwaọrụ ndị otu n'ime ndị isi smartphone mmepe na ụwa. Apple emenịm ndị kasị elu ụkpụrụ maka ihe ọ bụla ama emeputa ya otutu ma dị ike technology. The iPhones-mara ha ịke, imewe, arụmọrụ, na ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na ị na-dochie ekwentị gị na ọhụrụ iPhone, nwere ike ị chọrọ nyefee data.
1. The data ị ga-ebufe ga-agụnye kọntaktị, ozi ederede, videos, audios, ihe oyiyi, ngwa ọdịnala na oku na ndekọ. Ndị a data ụdị na-enweta a ụfọdụ ụdị ngwa. N'ihi ya, ị ga-achọ a dakọtara version nke ngwa iji nweta ya na iOS.
2. Onye ọ bụla data ga-agafeta iche site na Blackberry ka iOS.
3. N'ihi data dị ka ana-akpo, ị ga-enwe ka mmekọrịta site na iji ụzọ dị iche iche dị ka ha na-adịghị dị ka faịlụ. Ha nwere ike zigara site na iji a faịlụ akpọ vCard, nke na-eburu niile kọntaktị gị.
4. Nyefee data otu otu ga-awa, na ị na-agba ọsọ ahụ n'ihe ize ndụ nke misplacing a faịlụ ma ọ bụ na-ebufe malware.
Ụzọ kasị mma na-eme ka a transfer mfe bụ site na iji ọzọ software dị ka MobileTrans, nke-enye gị ohere mbubata Blackberry ndabere ka iOS. Nyefe nke data si Blackberry ka iOS ngwaọrụ nwere ike kewara abụọ n'akụkụ:
1. ebupụ Blackberry ndabere faịlụ ka PC eji Blackberry Desktọpụ Manager.
2. Nke abụọ, akụkụ-enye gị ohere nyefee faịlụ gị iOS site Iweghachi faịlụ site na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ zọpụta na kọmputa gị.
Exporting Blackberry ndabere
Tupu ị nwere ike nyefee data gị iOS, ị ga-ịmepụta ndabere nke faịlụ site na gị Blackberry. Nke a ndabere faịlụ eburu niile ọdịnaya ekwentị gị na otu faịlụ. Jide n'aka na nkwado ndabere a na-emelite otu. Lee ndị chọrọ mbupụ ndabere:
1. Blackberry Desktọpụ
2. Blackberry ekwentị
3. Eriri USB
Dị nnọọ emeghe Blackberry Desktọpụ na jikọọ ekwentị gị. Ọ ga-chọpụta na ekwentị gị. Ozugbo achọpụtara dị nnọọ pịa ndabere na chekwaa faịlụ jidesie gị na kọmputa.
Achọ ụzọ dị mfe iji nyefee data gị Blackberry ngwaọrụ gị iPhone na iOS ngwaọrụ? Ị nwere ike iji a software dị ka Wondershare MobileTrans.
MobileTrans Bụ 1-click data transfer software. Ị nwere ike nyefee gị zuru ezu data si Blackberry ka iOS na mfe otu. Nke a software na-agba na kọmputa na-enyefe data iji USB njikọ. Full version nwere ike ibudata site Wondershare website. E nwere ma windows na Mac version.
Software nwere ike ikwe ka nyefe n'etiti ọ bụla smartphones si iOS, Android, windows na Nokia. Ọ maara na-akwado gburugburu 3000 ụdị nke igwe.
Ị nwere ike mfe ndabere ekwentị gị data ma weghachi ya na mbụ mma.
Software nwekwara ihichapu nhọrọ, nke ihichapu niile data site na ekwentị na-enyeghachikwa ya ụlọ ọrụ ntọala. Nke a nhọrọ ukwuu mgbe gị na-achọ na-ere ekwentị ma ọ bụ nyefee onye ọrụ.
Interface nke software dị mfe na usoro were nanị minit ole na ole.
Nzọụkwụ nyefee ndabere ka iOS iji MobileTrans
MobileTrans Na-eme ka mgbagwoju anya usoro nke data transfer n'etiti abụọ dị iche iche OS mfe. Wụnye software na PC gị na ma hụ na ị na-aga site ndu ma ọ bụrụ na obi abụọ ọ bụla na otú e si eji software. Lee ndị a chọrọ maka usoro:
Computer Mac ma ọ bụ Windows
Malite software na-aga nhọrọ Weghachi si Backups. Ọ bụ nhọrọ ke green. Ugbu a dị họrọ iji weghachi si Blackberry ndabere.
Ugbu a software ga-echere gị jikọọ ekwentị gị. Dị ka isi iyi họrọ gị ndabere faịlụ site na kọmputa na-eme ka gị iOS ngwaọrụ dị ka gị na-aga. Malite n'etiti panel dị họrọ ọdịnaya ị chọrọ nyefee gị iPhone na pịa Malite Detuo.
On ọzọ window ị pụrụ ịhụ transfer ọganihu. Oge na-ahụ ga-adabere na size nke data bufee.
Ozugbo usoro okokụre, wepụ USB na ị pụrụ ịhụ data na gị iOS ngwaọrụ. Mepee iche ngwa ịhụ data.
Nke iOS ngwaọrụ ị na-eji?
IOS na ngwaọrụ ndị na-ewu ewu n'etiti ndị America ruru ka a oke ika nke Apple. O kere oke ofufe isi ruru ya okike na otutu ngwaahịa. Ha nọgidere na-atọ ọchị ha n'ji na ọhụrụ ngwaahịa. Ya mere nke iOS ngwaọrụ ị na-eji?
> Resource> iOS> otú nyefee Data si Blackberry ka iOS Devices